Blog Name - lawlawsal
Blog Address -
Created Date - 1st January 2009
Mail Address - lawlawsal@gmail.com
Amazing Blog Desktop eye magic files Football games Gtalk HTML Items Jokes Mail Myanmar National League News pagoda photos soccer Software Songs stats website Wishing နည်းပညာ
*An Asian Tour Operator*
*ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ…*
*စက်တင်ဘာ ရဲ့ ကောင်းကင်*
Posted by lawlawsal on August 12, 2019
Ok looking back, these posts are cringe, but Imma keep these up for memories and nostalgia.
If you’re my friend or someone I know, let me know you’ve stumbled across this and make me cringe hahah.
Life happened I guess? My last post was in May 2010, so I was about 12 years old and was havingagreat time during my 7th grade. NOT. Between 11 and 15 were some hard times especially at school, but hey my last school year was the best time of my life so I’d gladly take that.
I guess wordpress was blocked foralittle while in 2010, and then I moved toacustom html webpage (that I totally did not copy from the YgnUtd webpage), and later just stopped blogging and stuff.
Unfortunately, some time between 2010 and 2018, my blog was deactivated for suspicious activity, and I couldn’t even log in from my original account. All I could do was look back from the Wayback Machine to get some nostalgia. But luckily, sometime last year, I contacted the wordpress team and they reactivated my blog and YAY! Everything is back up now (Except for many of the photos, which suck because there’salot of good photos that will bring me backalot of memories 😦 … ).
On the other hand, I started blogging in 2007/2008 inadifferent website (which was actuallyacommunity website by Ning). My first ever website was http://vatreensnow.ning.com but sadly, its gone forever now. I divedalittle bit more into why, and I guess Ning becameapremium serviceawhile back, and they probably just deleted all inactive sites.
Anywaysss!! Why am I updatinga10 year old blog with zero visitors? Let me tell you.
Recently, I was onahunt to findayoutuber user who uploadedalive Jason Mraz video (I’mabig, BIG, Jason Mraz fan). I wanted to thank them personally because there’s one video they uploaded that affected me emotionally (inagood ugly way that I needed), and I wanted to send them an heartfelt thank-you letter.
During my hunt, I foundarandom blog who shared that video, and I emailed them asking if they were the original uploader (they weren’t, but that’s not the point). A beautiful thing I learned from this hunt was that this blogger started blogging ages ago, but is still blogging. It made me happy. From my perspective at least, Personal blogging have died, compared to how it wasadecade ago. I’d often come across old blogs, and I would check the date of their latest post, and it always makes me sad to find that all of them haven’t posted in many years, and have likely left their blog.
I also hadawonderful experience during my email interaction with this blogger. I wrote to her about how her blogging gave me some joy, and that she has such an inspiring blog. She was happy to hear my kind words about her blog, and I was happy to beapleasant stranger as well haha.
Overall, her blog inspired me. I have always wanted to have some kind ofadiary (daily diaries never worked for me by the way) that I can look back at, and I remember I have this blog. Although this blog isn’tapersonal diary kind of blog that I wish I had, it still showsalot about how I used to be, and gives me the memories of the old days.
I hope this blog never gets deleted (Please WordPress), and I hope that in 10 years, I’ll come back here and remember this exact moment.
Thanks Tiffany for the inspiration.
Posted by lawlawsal on September 1, 2019
I remember when I was 9, I consciously appreciated how amazing the internet is. Internet was not only new in my life, but it was also during its beginning phases in Myanmar. Video calls (remember VZOChat? ooVoo?) wereastable part of my life, and I remember appreciating how amazing it is to SEE and talk with someone from anywhere in the world. You don’t need to beamillion-dollar broadcasting channel to streamalive feed; A click ofabutton is all you need! And it’s REAL TIME! Some big box called “the computer” andabunch of wires, that’s all you need. At 21 years old today, it still amazes me how incredible technology is.
I was always into technology. At around 5-6 years old, I would always be playing around with my parent’s flip phones, and their Nokias. Heckk, once, there was an unused cellular flip phone lying around, so my parents gave it to me and from then, it was ALWAYS by my side for the next few years. It had no games, apps, oracamera. It couldn’t even makeaphone call (911 worked though. Freaked us out when they actually picked up). But it made me so happy. All I do is just switch around menus. 99% sure it is this phone, but if not, certainlyaphone very similar to this.
I got off tangent there.
The internet really excited me. Around 2007, blogging community was growing, and I became part of it (This blog was createdafew years after that; I started way before this withaNing website). If anyone from back then is reading this, remember ProblemClean.ning.com? ProblemClean GoogleTalk ChatRoom? or MyanmarITDevelopment? or maybe even.. MyanmarITUpdate??
I branded myself asa9 year old blogger (which is cringe today.. but it wasadifferent time back then. And I was 9. What do I know). They were amazing times. I learned so much, and I CREATED so much! I was happy, because I was creating things that many people older than me were not! Sometimes, when I was the center of attention, I would also enjoy it! I chatted with adults EVERY SINGLE DAY, and many of them appreciated what I did (of course they’re also being nice because I’makid but I appreciate it nonetheless). I’ll makeadifferent post about my journey asablogger, because it wasabig deal to me,ahuge part of my life, and there arealot of things I want to share!
Softwares, Computers, Internet, Websites; They all excited me so much.. I was always trying to learn and figure out what they are, playing around with html and css in an attempt to fix my website, trying to become more knowledgable at computers just because it. is. so. much. fun! That was until I was about 13 or so anyways. Since then, I lost the drive and the motivation. And I miss it so much.
I’m still so in love with technology today. It still excites me. I follow tech Youtubers. Tech subreddits. Tech shows. Watching and reading tech related stuff was and is still neveraburden to me. It’s just like watching entertainment stuff. It is entertaining. But sadly, I’ve lost the drive to go out of my way to learn new stuff. A very big example is Programming. I love it. I love the logical challenges it brings. I especially LOVE automating things. Creating programs. Oh boi how I wish I was very good at programming. But I haven’t fully pushed myself to the max to improve myself. I’m still an absolute beginner because I never took the time. Writing about it now in words actually kinda makes me wonder why. It’s not because I’m discouraged by the long journey programmers go through. It’s also not because I don’t enjoy it, because on multiple occasions, I’ve gone on weeks and months of programming, and enjoyed it SOOOO much. Okay..now I think I’m starting to realizeacertain reason why, but I’ll leave it out of this post. But If that is the reason why, then I’m hoping I can be that excited kid again soon, and have the drive to push myself in the future! At least I hope.
Ok this post isn’t organized at all, going from topic to topic. Shows how little I write and how much I suck at it. Welps. I hope to improve.
Ahh. In Conclusion, I love the internet. I’ll title the next post “The Internet (Actual Post)” because I didn’t get to talk aboutalot of the actual stuff I want to talk about in this one lol.
Posted by lawlawsal on May 25, 2010
houseofit.wordpress.com အား မြန်မာပြည်မှ (အဟမ်း) wordpress server အားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပီဖြစ်သောကြောင့် ဒီကြားထဲမှာ မည်သည့်ပို့စ်မှ မတင်ဖြစ်သလို ဆိုက် အသစ်တည်ထောင်နေခြင်းကြောင့် မအားလပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ လောလောဆယ် ၏ ဘလော့သည် houseofit.wordpress.com မှ ကိုယ်ပိုင် လိပ်စာအနေဖြင့် http://www.kaungmyathtet.co.cc/home/ သို့ ကူးပြောင်းပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့ဖတ်ချင်သူတွေအနေဖြင့် http://www.kaungmyathtet.co.cc/home/ သို့ လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာမောင်းခတ်မောင်းတီး လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား
Posted in တစ်ခြား | LeaveaComment »
ဆိုက်အမျိုးဆုံက ဒေါ်င်းနိုင်မဲ့ VDownloader 1.12
Posted by lawlawsal on February 12, 2010
အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ Video Downloader တစ်ခုပါ။
VDownloader ဟာ ဆိုက်တော်တော်များများက ဗီဒီယိုတွေကို လွယ်ကူစွာပဲ Download နိုင်ပါတယ်။အောက်ပါဆိုက် များဖြစ်ပါတယ်..
Vdownloader ဟာ တစ်ခါထဲမှာပဲ AVI, MPG, iPOD, PSP, 3GP, VCD, SVCD, DVD, FLV , MP3 စတဲ့ ဖိုင် format တွေကိုလဲ ပြောင်းလဲ သုံးဆွဲနိုင်ပါသေးတယ်။
5.23MB ပဲရှိတာကြောင့် ဒီနေရာမှာ အမြန်ဒေါ်င်းနိုင်ပါတယ်။
Posted in ဖိုင်များ | Tagged: files |3Comments »
Posted by lawlawsal on November 21, 2009
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းပုံ တို့ ၊ ကိုယ့်မိသားစု ပုံ ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရယ်စရာလေးဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရ တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ ကျွန်တော် တော့ မသုံးကြည့်ရသေးဘူး… 😀 …ယူချင်တဲ့လူတွေ ယူပြီး စမ်းသုံး ကြည့်ပေါ့်။ မကြိုက်ရင် ကျွန်တော့်ကိုပြော အသစ်ထပ်တင်ပေးမယ်။ 🙂
Posted in ဖိုင်များ |2Comments »
ဂစ်တာ ကြိုးညှိဖို့အတွက် Digital Guitar Tuner
Posted by lawlawsal on November 6, 2009
Posted in ဖိုင်များ | Tagged: files | 1 Comment »
ချယ်လ်ဆီး Vs မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲကြီးပွဲကောင်း မတိုင်မီ ပရိသတ်များ၏ အမြင်များ – SoccerMyanmar
ချယ်လ်ဆီး Vs မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲကြီးပွဲကောင်း မတိုင်မီ ပရိသတ်များ၏ အမြင်များ
ပရိသတ် – လောလောဆယ် (ချယ်လ်ဆီး)
ဘယ်သူ ခြေသာမယ် ထင်လဲ?
ချယ်လ်ဆီးပဲ ပိုခြေသာမယ် ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်း ခြေစွမ်းက အရမ်းကောင်း နေတယ်လေ။
ပွဲတိုင်း လိုလိုမှာ ဒရော့ဘာက ဂိုးသွင်းနေတယ်။ နောက်ပြီး အသင်း ကစားပုံကလည်း အချိတ်အဆက် မိနေတယ်။
ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး အရာ?
တိုက်စစ်လို့ ထင်တယ်။ မန်ယူက ဂိုးသွင်းတာ တိကျတယ်။ နောက်ပြီး ချယ်လ်ဆီးနဲ့ တွေ့တိုင်းလည်း နေရာစုံကနေ ဂိုးသွင်းနေတတ်တယ်။
သရေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသင်းကြီး နှစ်သင်း တွေ့တာဆိုတော့ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။
ချယ်ဆီး ၂ – ၁ မန်ယူ
Posted in တစ်ခြား | Tagged: soccer | LeaveaComment »
Posted by lawlawsal on November 2, 2009
ဒီနေ့က ကျွန်တော့် မမ မေဖြိုးသီ ရဲ့မွေးနေ့ လေ။အင်း.. ဒါ့ကြောင့် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှုင်ပါစေလို့..နောက်ပြီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာလဲ ပျော်ရွှုင်ပါစေလို့… အသက် ၁၀၀၀
အထိ ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ သားသား ရဲ့ ဒီဘလော့လေး
ကနေ ချစ်လှစွာတော့ မမကို မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်..။
Birthday Present Box!! What do u think it’s inside the box??hmm.. It’s something inside.That may be the air. 😀
Posted in တစ်ခြား | Tagged: Wishing | LeaveaComment »
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဒဇိုင်းနဲ့ Search Engine
Posted by lawlawsal on October 25, 2009
ကိုယ့်အတွေးစိတ်ကြိုက်ဒဇိုင်းနဲ့ Homepage အဖြစ်လုပ်ထားလို့ရတာပေါ့်။
ShinySearch လင့် က တော့ http://www.shinysearch.com ပါ။
ဒါကတော့ Hunting ဒဇိုင်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါ။
Posted in တစ်ခြား | Tagged: website | LeaveaComment »
aurorageneration ဆူမိုပေါက်စီ, ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်
Posted by lawlawsal on October 24, 2009
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ဖတ်ကြည့်
ကျွန်မ ရဲ့ခင်ပွန်းက software engineer တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ ရဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စရိုက်လေးကို ကျွန်မချစ်တယ်။ သူ့ ပုခုံးပြင်ကျယ်ကြီးပေါ် မှီလိုက်တိုင်း ရရှိလာတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ခံစားမှုလေးကို ကျွန်မချစ်တယ်။
ကျွန်မတို့ ချစ်သက်တမ်း နှစ် နှစ်အကြာမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ အခုဆို အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်တောင်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီအိမ်ထောင်ရေးကို ကျွန်မငြီးငွေ့ လာပြီလို့ ဝန်ခံပါရစေ။ သူ့ အပေါ်ချစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကလည်း ကျွန်မအတွက် စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲနေပါပြီ။
ကျွန်မစိတ်က သိပ်ပြီးထိခိုက်ခံစားလွယ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ကျွန်မခံစားချက်တွေအပေါ် ကျွန်မသိပ်ကို ခံစားလွယ်ခဲ့တယ်။ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက် ချိုချဉ်သကြားလုံးကို တပ်မက်တွယ်တာသလို ကျွန်မတို့ ရဲ့ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်ခဏလေးတွေကို တမ်းတနေတယ်။ သူခံစားချက်ကတော့ ကျွန်မခံစားချက်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးကို ဆန့် ကျင်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ ရဲ့တည်ငြိမ်နိုင်လွန်းမှုတွေ နဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ် အချိန်ကလေးတွေ မရှိဘူးလို့ ကျွန်မထင်လာတဲ့အခါမှာ အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်မစိတ်နာစပြုလာတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်နေ့ မှာတော့ ကျွန်မ သူနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူ့ ကိုပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။
“လမ်းခွဲမယ် ဟုတ်လား…ဘာလို့ လဲ ” သူ ထိတ်လန့် တကြားတော့မေးရှာပါတယ်။
“ကျွန်မ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ… ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်တိုင်းမှာ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါဘူး…”
အတွေးထဲနစ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့သူတစ်ညလုံး ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။ သူ့ ကိုကျွန်မစိတ်ပါပျက်လာတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်စီက ကျွန်မ ဘာများထပ်ပြီးမျှော်လင့်နေရဦးမှာလဲ….
နောက်ဆုံးတော့ သူ ကျွန်မကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတယ်။ “ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရင် မင်းရဲ့စိတ်တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ” တဲ့။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ ပြင်လို့ မရရိုးထုံးစံပဲမဟုတ်လား…။ သူ့ အပေါ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေလည်း ပျောက်ဆုံးကုန်ပါပြီ။
သူ့ မျက်ဝန်းတွေထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်လိုက်ပြီး ကျွန်မဖြေလိုက်တယ်။ “ကျွန်မမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။ ဒါကို ရှင်အဖြေပေးနိုင်ရင် ကျွန်မ နှလုံးသားကို ပြန်ပြီးလှုပ်ခတ်နိုင်ရင် ကျွန်မရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်လိုက်မယ်…”
“တောင်ထိပ်ဖျားမှာရှိနေတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ကို ကျွန်မလိုချင်တယ်… အဲဒီပန်းပွင့်ကို ခူးလိုက်ရင် ရှင်သေရလိမ့်မယ် ဆိုတာလည်း ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး သိနေကြတယ်ဆိုပါတော့… ဒါဆို ဒီပန်းကို ရှင်ကျွန်မအတွက် ခူးပေးနိုင်မလား” ။
သူပြန်ဖြေတာကတော့ ….”မနက်ဖြန်ကျရင် မင်းကို ငါအဖြေပေးမယ်” ဆိုတာပဲ။ သူ့ စကားကိုကြားလိုက်တဲ့ တခဏမှာပဲ ကျွန်မရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ စုန်းစုန်းမြုပ်သွားတယ်။
မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ သူမရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်ရှေ့ တံခါးနားက စားပွဲပေါ်မှာ နွားနို့ ခွက်နဲ့ ဖိထားတဲ့ သူ့ လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင်ကိုပဲ ကျွန်မတွေ့ ရတယ်။
စာထဲမှာရေးထားတာကတော့….. “အချစ်ရယ်… ငါမင်းအတွက် အဲဒီပန်းပွင့်လေးကို မခူးပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ငါဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကိုတော့ ငါ့ကို ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ….။”
ပထမ စာတစ်ကြောင်းနဲ့ တင် ကျွန်မနှလုံးသားတွေ ကွဲကြေကုန်ပါပြီ။ စာကိုဆက်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။
” မင်း ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့အခါတိုင်း ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တွေအားလုံး ကမောက်ကမနဲ့ ရှုပ်ထွေးကုန်တယ်လေ…အဲဒီနောက် မင်း ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရှေ့ မှာငိုတော့တာပဲ။ ဒီပရိုဂရမ်တွေ နေသားတကျ ပြန်ဖြစ်အောင် မင်းကိုကူဖို့ အတွက် ငါ့လက်ချောင်းလေးတွေရှိနေမှရမယ်။ ”
“မင်းအပြင်သွားတိုင်း အိမ်သော့ကို အမြဲမေ့ထားခဲ့တတ်တယ်နော်။ အဲဒီအခါကျရင် မင်းအရင်အိမ်ကို ရောက်နှင့်အောင် အပြေးပြန်လာဖို့ လည်း ငါ့ ခြေထာက်တွေရှိနေရဦးမယ်။”
“မင်းက ခရီးသွားနေရတာကိုလည်း ပျော်တယ်နော်။ မြို့ အသစ်တစ်ခုကို ရောက်တိုင်း မင်းမျက်စိလည် လမ်းမှားတော့တာပဲ။ မင်းကို လမ်းရှာပေးဖို့ ငါ့မျက်လုံးတွေလည်း လိုတယ်နော်ကွာ”
“မင်းနဲ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေ တစ်လတစ်ခါ ဂေါက်ရိုက်သွားတိုင်းလည်း မင်းရဲ့ ကြွက်သားတွေ နာနေတတ်တယ်လေ။ ဒီတော့ မင်းရဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေ နာနေတာကို ဖြေပေးဖို့ ငါ့ရဲ့လက်ဖနောင့်လေးကိုလည်း ချန်ထားရလိမ့်မယ်”
“မင်းက အိမ်ထဲမှာနေရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ မင်းအရွယ်မတိုင်ခင် အိုစာသွားမှာကို ငါသိပ်စိုးရိမ်တာပေါ့။ မင်းမပျင်းရအောင်လို့ ပုံပြင်တိုလေးတွေ ဟာသလေးတွေကို ပြောပြဖို့ ငါ့ပါးစပ်ကလေးလည်း ရှိနေရဦးမယ်”
“ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်တွေက မင်းမျက်လုံးအတွက် လုံးဝမကောင်းနိုင်ပေမယ့် မင်းတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတယ်လေ။ ငါတို့ အိုလာတဲ့အခါ မင်းရဲ့လက်သည်းလေးတွေ ညှပ်ပေးဖို့ …မင်းဆံပင်ဖြူတွေ နှုတ်ပေးဖို့ ငါ့မျက်လုံးလေးတွေရှိနေရမယ်မဟုတ်လား။ ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါလည်း မင်းလက်ကလေးကို ငါတွဲပေးနိုင်မယ်လေ။ နေရောင်အောက်က လှပနေတဲ့ သဲဖြူတွေကို မင်းနှစ်သက်တယ်လေ။ ပြီးတော့ မင်းကို ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့အရောင်ကို ပြောပြလို့ ရမယ်။ ”
“ဒါကြောင့်ပါကွာ…မင်းကို ငါ့ထက်ပိုချစ်နိုင်မယ့်သူ ရှိမယ်လို့ မသေချာသေးသ၍ မင်းပြောတဲ့တောင်ပေါ်ကပန်းကို ခူးပြီး ငါမသေပါရစေနဲ့ ဦး။”
ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ စာရွက်ပေါ် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် လှိမ့်ဆင်းလာတော့တယ်။ သူ့ လက်ရေး နဲ့ မင်လေးတွေ့ စာရွက်ပေါ် ပြန့် သွားတဲ့အထိပါပဲ။ စာကို ကျွန်မ ဆက်ဖတ်ပါသေးတယ်။
“ကဲအခုလောက်ဆို မင်းလည်းစာကို ဖတ်ပြီးလောက်ပြီ။ ငါ့အဖြေကို မင်းကျေနပ်တယ်ဆိုရင်… မင်းအတွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နွားနို့ နဲ့ ပေါင်မုန့် တွေဝယ်လာပြီး အိမ်ပြင်မှာ ရပ်နေတဲ့ ငါ့ကို တံခါးလာဖွင့်လှည့်ကွာ..”
ကျွန်မအပြေးအလွှား တံခါးသွားဖွင့်တဲ့အခါ သူ့ ရဲ့စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။ လက်ထဲမှာလည်း နို့ ပုလင်းတွေ၊ ပေါင်မုန့် တွေ တစ်ပွေ့ တပိုက်နဲ့ ပေါ့။ အခုတော့ သေချာသွားပါပြီ။ သူ့ လောက် ကျွန်မအပေါ် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ။ တောင်ပေါ်က ပန်းပွင့်လေးကိုလည်း သူ့ ဘာသာ တစ်ပွင့်တည်းရှိပါစေတော့…. ဒါဟာ ဘဝပါပဲ..အချစ်ဆိုတာလဲ ဒါပါပဲ။
ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်းအချစ်ရှိနေတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ ခံစားချက်တွေ မှေးမှိန်နေသလိုပါပဲ။ အဲဒီအခါ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်မှုတွေ ရဲ့ကြားထဲမှာ တည်နေတဲ့ အချစ်ကို မျက်ကွယ်ပြုဖို့ ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။
အချစ်ဆိုတာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အလွန်သေးငယ်ပြီးတဲ့ပုံစံ နဲ့ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်…. သူ့ မှာစံပုံစံဆိုတာမရှိပါဘူး။ အမှေးမှိန်ဆုံးပုံစံလေးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်..ငြီးငွေ့ ဖွယ်ပုံစံနဲ့ ရောပေါ့။
ပန်းပွင့်တွေ…စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ဟာ အပေါ်ယံပါဆက်ဆံရေးတစ်ခုပါပဲ.. အဲဒါတွေ အားလုံးရဲ့ အတွင်းကျကျနေရာမှာတော့ အချစ်စစ်ရဲ့ အဓိက နေရာရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ဘဝပါပဲ….
*အပေါ်က ပုံလေးကို http://www.flickr.com/photos/moemoechi/1246549971/ ကနေ ယူသုံးထားပါတယ်
Posted in တစ်ခြား | Tagged: Blog | 1 Comment »